रिसानी माफकी “आशा खड्का”को आमा-छोरीले रुदै घर छोडे ! अन्तर्वार्तामै रुवाबासी ! (हेर्नुहोस भिडियो)
रिसानी माफकी आशा खड्काको आमा-छोरीले रुदै घर छोडे ! अन्तर्वार्तामै रुवाबासी ! (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं- नेपाली हाँस्यटेलिचलचित्रहरुले राम्रो फड्को मारिरहेका छन् । जसले गर्दा कलाकार तथा ती टेलिसिरियलहरुले दर्शकको अगाध माया बटुलिरहेका छन् । हाँस्य टेलिचलचित्र हर्के हल्दारमा अभिनय गर्ने आशा खड्का दर्शकको मन जित्न सफल कलाकार हुन् । उक्त सिरियलमा उनले बोल्ने नेवारी लवजले सबैको उनीतर्फ ध्यानाकर्षण हुने गर्छ।
क्षेत्री परिवारको छोरी भएता पनि नेवारी बोलीले दर्शकलाई प्रभावित गर्न सक्नु उनको अभिनय क्षमताको प्रमाण पनि हो । विगत ८ वर्ष भन्दा बढी समय देखि अभिनय क्षेत्रमा बिताएकी उनले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरेकी छिन्।
हसाउने कलाकारहरु प्राय भित्र भित्र दुखी हुन्छन् । नेपालका मात्रै हैन बिदेशी कलाकारहरु पनि यस्तो कथाहरु समय समयमा सुनाउँछन् । आफु रुदै दर्शक हसाउने महान कलाकारहरुको बिचमा एक नाम हो, आशा खड्काको । आशाको जीवन कथा सबैलाई रुवाउने छ । उनले जीवनमा निकै ठुलो सँघर्ष गरेकी छिन् ।
यसैबिच शिशिर भण्डारीसँगको कुराकानीमा आशा र उनको आमाले रुदै आफ्ना कथाहरु सुनाए । वास्तवमा सानैमा आमासँगै गाउँ छोडेर शहर आएकी आशाले निकै दुख खपेकी छिन् । आफ्ना सँघर्षका कथा सुनाउँदा भावुक बनेका आमाछोरी बिच निकै प्रेम देखियो ।
* काठमाडौं- नेपाली हाँस्यटेलिचलचित्रहरुले राम्रो फड्को मारिरहेका छन् । जसले गर्दा कलाकार तथा ती टेलिसिरियलहरुले दर्शकको अगाध माया बटुलिरहेका छन् । हाँस्य टेलिचलचित्र हर्के हल्दारमा अभिनय गर्ने आशा खड्का दर्शकको मन जित्न सफल कलाकार हुन् । उक्त सिरियलमा उनले बोल्ने नेवारी लवजले सबैको उनीतर्फ ध्यानाकर्षण हुने गर्छ।
क्षेत्री परिवारको छोरी भएता पनि नेवारी बोलीले दर्शकलाई प्रभावित गर्न सक्नु उनको अभिनय क्षमताको प्रमाण पनि हो । विगत ८ वर्ष भन्दा बढी समय देखि अभिनय क्षेत्रमा बिताएकी उनले थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरेकी छिन्।हसाउने कलाकारहरु प्राय भित्र भित्र दुखी हुन्छन् । नेपालका मात्रै हैन बिदेशी कलाकारहरु पनि यस्तो कथाहरु समय समयमा सुनाउँछन् ।
आफु रुदै दर्शक हसाउने महान कलाकारहरुको बिचमा एक नाम हो, आशा खड्काको । आशाको जीवन कथा सबैलाई रुवाउने छ । उनले जीवनमा निकै ठुलो सँघर्ष गरेकी छिन् ।यसैबिच शिशिर भण्डारीसँगको कुराकानीमा आशा र उनको आमाले रुदै आफ्ना कथाहरु सुनाए । वास्तवमा सानैमा आमासँगै गाउँ छोडेर शहर आएकी आशाले निकै दुख खपेकी छिन् । आफ्ना सँघर्षका कथा सुनाउँदा भावुक बनेका आमाछोरी बिच निकै प्रेम देखियो ।
हेर्नुहोस, आशाको यस्तो भिडियो ।